मलेसियाको सामाजिक कार्यक्रम अनुसार कस्ता श्रमिकको परिवारलाई आजीवन रकम दिने व्यवस्था छ ? - ramechhapkhabar.com
मलेसियाको सामाजिक कार्यक्रम अनुसार कस्ता श्रमिकको परिवारलाई आजीवन रकम दिने व्यवस्था छ ?
मलेसियाले नेपालीसहित विदेशी श्रमिकको परिवारलाई पनि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा आबद्ध गर्न सुरु गरेको छ । मलेसियाको भिसा प्रक्रियाका लागि स्वास्थ्य परीक्षण (बायोमेडिकल) गर्ने बेला नै कामदारले परिवारको निकटतम सदस्यको नागरिकतासहित विवरण पेस गर्ने नियम मंगलबारदेखि कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । मलेसियाले सन् २०२० जनवरी १ मा मृत्यु तथा अंगभंग भएका विदेशी श्रमिक तथा तिनका परिवारलाई समेत आजीवन पेन्सन दिने योजनासहित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम (सोस्को) सुरु गरेको थियो । ‘कामदारले बायोमेडिकल गर्ने बेला नै आफ्नो निकटतम व्यक्तिको नाम दर्ता गर्नुपर्छ । यो सिधै विदेशी श्रमिकको केन्द्रीय व्यवस्थापन प्रणालीमा जोडिन्छ,’ नेपालका लागि मलेसियाका कार्यवाहक राजदूत मोहमद फाजिल अबु हसनले भने । यो प्रणालीमा श्रमिक व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित मलेसियाका सबै विभाग जोडिएका छन् ।
त्यस्तै, दुर्घटनामा परी काम गर्नै नसक्ने भए श्रमिकले आफ्नो दैनिक तलबको ९० प्रतिशतका दरले स्थायी अक्षमता भत्ता पाउने छन् । अस्थायी रूपमा काम गर्न अक्षम भएकाले भने आयआर्जनमा तोकिएका सर्तका अधीनमा रही तलबको ८० प्रतिशतसम्म लाभ प्राप्त गर्न सक्ने दूतावासले जनाएको छ । अस्थायी अक्षमता लाभ, स्थायी अक्षमता लाभ र आश्रित लाभ भने श्रमिक स्वयम् वा निजको परिवारजनले पाउने सुविधाहरू हुन् । मृत्यु भएका श्रमिकको रोजगारदातालाई मलेसियामै वा श्रमिकको मुलुकमा दाहसंस्कार गर्दा तोकिएबमोजिमको अन्त्येष्टि खर्च उपलब्ध गराइन्छ । १ जनवरी २०२० देखि सबै रोजगारदाताले अनिवार्य रूपमा सोस्कोमा आबद्ध गराउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । कान्तिपुर संवाददाता